एउटा अर्को वर्ष, पाँचौँ गोल्डेन बुट । के लाग्छ तपाईलाई, जितेर थाक्नु भएको छैन ?
उपाधि जित्नु एउटा राम्रो पक्ष हो । यसले खेलाडीको मनोल उच्च बनाउने काम गर्छ । यो टिमको लागि उपाधि हो । कुनै समय जामोरालाई पछि पार्दै गोलरक्षकले जिते । यो सामान्य प्राइज हो । म खुसी छु कि अर्को पटक पनि जित्न सक्षम रहेको छु ।
पाँचवटा गोल्डेन बुट्स, पाँच वटा बेलोन डिओर, अब पाँचौँ च्याम्पियन्स लिगको उपाधिको प्रतिक्षा हो ?
यो सुन्दा खुसी लाग्छ । मैले यस सिजनको सुरुवातमा नै च्याम्पियन्स लिग हाम्रा लागि एउटा विशेष चुनौती हो । यो उपाधि प्रत्येक वर्ष जितुजितु सबैलाई हुन्छ ।